४० करोडको महादेव! (भिडिओ) :: युवराज श्रेष्ठ :: Setopati
४० करोडको महादेव! (भिडिओ)
फोटो सौजन्य : सुमन बराल
कात्तिकको अन्तिम साता पोखरा भ्रमणमा आएका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई फेवाताल पारिको डाँडा पुम्दीकोटका स्थानीयले आफ्नो गाउँमा आउन निम्तो गरे।
फेवातालपारिको वनमाथि रहेको डाँडामा स्थानीयले भगवान महादेवको मन्दिर र विशाल मूर्ति स्थापना गरेका छन्। त्यहीँ मूर्ति देखाउन उनलाई बोलाएका थिए।
ठाउँठाउँमा भत्किएको अप्ठेरो बाटो छिचोल्दै पुम्दीकोट गएर अर्थमन्त्री शर्माले महादेवको मूर्ति हेरे। त्यसपछि अर्थमन्त्री शर्माले स्थानीयसँग बाटो कालोपत्र गर्न सहयोग गर्ने आश्वासन दिएको वडा सदस्य चेतभक्त शर्मा बरालले बताए।
उनीमात्र होइन गण्डकीका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल, पूर्व प्रदेश प्रमुख सिता पौडेल, भौतिक पूर्वाधार मन्त्री कुमार खड्कालगायत पनि उक्त ठाउँ पुगिसकेका छन्। गण्डकी सरकारका अर्थमन्त्री रामजी बराल ‘जीवन’ले मन्दिरसम्म पुग्ने बाटो कालोपत्र गर्ने आश्वासन दिएका छन्।
वीरगञ्ज, काठमाडौंका व्यापारीदेखि अन्य सर्वसाधारणले दिएको चन्दा र नेपाल सरकारले गरेको सहयोगले पुम्दीकोटमा महादेवको मन्दिर र मूर्ति स्थापना गरि धार्मिक पर्यटनस्थलको रूपमा विकास गर्न लागिएको छ।
यहाँ नेताहरूमात्र होइन महादेवको प्रतीमा हेर्न अहिले पुम्दीकोटमा अरू सर्वसाधारणको भिड बढिसकेको छ।
उक्त स्थानबाट उत्तरतर्फ अन्नपूर्ण हिमश्रृंखलाका सबै हिमाल देखिन्छ भने तल फेवाताल र पोखरा सहरको मनोरम दृश्य देखिन्छ। दक्षिणतर्फ फर्काएर शिवको प्रतिमा स्थापना गरिएको छ तर यो अझै बनाएर सकिएको भने छैन।
पुम्दिकोटमै घर भएका चन्द्रकान्त बरालले यो महादेवको प्रतिमा स्थापना गर्ने मन्दिर बनाउने कामको नेतृत्व गरेका छन्। ‘पुम्दीकोट विकास समिति’ गठन गरेर त्यसको अध्यक्ष पनि उनै भएका छन्।
समितिले सुरूमा फेवातालपारि वनमाथि जग्गामा शिव मन्दिर बनाउन जिल्ला वन कार्यालयसँग अनुमति लिएको थियो। अनुमति पाएपछि शिव प्रतिमा बनाउन गाउँमै महायज्ञको आयोजना गर्‍यो।
महायज्ञ लगाउँदा गाउँबाटै ८ करोड रूपैयाँ उठ्यो। शिव प्रतिमासहित मन्दिर र विभिन्न धार्मिक संरचना बनाउन ४० करोडको योजना बन्यो। त्यसपछि समितिले आर्थिक संकलन अभियानलाई तिव्रता दियो।
उक्त धार्मिक संरचना बनाउन पोखरा महानगर, गण्डकी सरकार र संघीय सरकारसँग पनि आर्थिक सहयोग जुटाउन सफल भए।
आर्थिक संकलनका क्रममा शिव प्रतिमा बनाउन अहिलेसम्म १२ सय जनाले आर्थिक सहयोग गरिसकेको समितिले जनाएको छ। आर्थिक संकलन अभियान अहिले पनि चलिरहेको छ।
सबभन्दा धेरै ३ करोड रूपैयाँ मूल्य बराबरको सहयोग काठमाडौंका व्यवसायी कमल जैनले सहयोग गरेका छन्। वीरगञ्जका उद्योगपति मुरलीधर रूंगटाले १ करोड रूपैयाँ नगद दान दिएको अध्यक्ष बरालले बताए।
४० करोड रूपैयाँको लागत अनुमान गरिएको उक्त योजना अन्तर्गत अहिलेसम्म आधा अर्थात् २० करोड रुपैयाँ बराबरको काम सकिएको छ।
अझै २० करोडको संचना बनाउन बाँकी नै छ। अध्यक्ष बरालका अनुसार कुमार–पार्वती स्ट्याचू, सुमेरू पर्वत, ग्रिनरी पार्क, पार्किङ, विभिन्न देवदेवीको प्रतिमा राख्न बाँकी नै छ।
सार्वजनिक र सरकारी गरी यति ठूलो लगानीमा शिव मूर्ति स्थापना गर्दा धार्मिक पर्यटन प्रवर्द्धन हुने अपेक्षा गरिएको अध्यक्ष बरालले बताए।
उनले उक्त शिव मूर्तिलाई दक्षिण एसियाकै ठूलो भएको दाबी गरेका छन्। उनले शिवमूर्तिको उचाइलाई नभइ संरचना ठूलो भएको दाबी गरेका हुन्।
शिव मन्दिरको साटो यति ठूलो लगानी गरेर पुस्तकालय, स्कुल वा अस्पतालजस्ता जनताका आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्न सक्ने संरचना बनाउनुपर्नेमा कतिपयको जोड छ।
बराल भने त्यहीँ मन्दिरको माध्यमबाट यस्ता संरचना बनाउन सकिने बताउँछन्।
‘मान्छेलाई के लाग्छ भने अर्बौं खर्च गरेर मन्दिर बनाउनुभन्दा कलेज, स्कुल बनाइदिए हुन्थ्यो भन्ने लाग्दोरहेछ,’ उनले भने, ‘धार्मिक पर्यटनको हब बनाउने हाम्रो लक्ष्य हो, परम्परा धान्नुपर्छ, यसले भविष्यमा कलेज, अस्पताल धान्नसक्छ।’
पोखरा घुम्न आउने पर्यटकलाई एक दिन भए पनि बसाइँ लम्ब्याउन सके देशको आर्थिक विकासमा फाइदा पुग्ने उनको दाबी छ।
शिव मन्दिर बनाएपछि गाउँका युवा बेरोजगार बन्नुनपर्ने भन्दै उनले गाउँमै उत्पादन गरेर गाउँमै बिक्री गर्न सक्ने अवस्था सिर्जना भइसकेको बताए।
५ वर्षअघि पोखरा बस्ने चन्द्रकान्तले सपनामा महादेव तलाउमा तैरिरहेको देखेको बताउँछन्।
सपनामा आफूले मान्ने भगवान शिवको जुन प्रतिमा देखेका थिए, तत्काल उनले त्यहीँ प्रतीमा बनाउन लगाए। आफ्नो कार्यकक्षमा त्यहीँ प्रतीमा राखे।
पोखरामा दानाको व्यवसाय गर्दै आएका बरालले कार्यकक्षमा राखिएको शिव मूर्ति देखाउँदै भने, ‘शिवजीको यहीँ प्रतिमा मैले सपनामा देखेको थिएँ, त्यसै प्रकारको मूर्ति पुम्दीकोटमा स्थापना गर्ने अठोट गरेँ।’
बरालको पुरानो घर पुम्दीकोट हो। कोटमा मन्दिर बनाएर स्थानीय परम्परादेखि नै भूमेश्वरको पूजा गर्छन्। त्यही मन्दिर भएको ठाउँमा सपनामा देखेको शिवजीको विशाल प्रतिमा बनाउन बरालले प्रतिज्ञा गरे।
मन्दिर भएकै ठाउँमा यसअघि शान्ति मन्त्रालयको सहयोगमा भ्युटावर बनाइएको छ।
पुम्दीकोटभन्दा करिब २ किलोमिटर तल विश्व शान्ति स्तुप छ। बौद्ध धर्मावलम्बीको उक्त स्तुपा पनि पोखराको पर्यटकीय आकर्षणमध्ये एक हो।
गाउँ जाने बाटो छैन
पुम्दीकोटमा बनेको विशाल शिव प्रतिमा हेर्न जानेको भिड बढे पनि बाटोको अवस्था भने नाजुक छ।
पोखरा–लुम्बिनी जोड्ने सिद्धार्थ राजमार्ग हुँदै पुम्दीकोटतर्फ उकालो लाग्दा यात्रुले धेरै ठाउँमा जोखिम मोल्नुपर्ने अवस्था छ।
पोखरा–२२ का स्थानीय बद्रिनाथ बरालले पुम्दीकोट पुग्न विभिन्न ठाउँबाट मोटरबाटोको ट्रयाक खोलिए पनि स्तरोन्नति हुन नसकेको बताए।
‘गाउँमा मोटरबाटोको सुविधा पुगेको छैन, मन्दिर हेर्न आउनेलाई पनि दु:ख छ,’ उनले भने, ‘सरकारले बाटो बनाउन ध्यान दिनुपर्छ।’
शिव मन्दिरमा मात्र नभई गाउँलाई नै जोखिममा पर्ने गरी निजी जग्गाबाट ढुंगा निकाल्ने काम भइरहेको समेत उनले बताए। अहिलेसम्म त्यसतर्फ भने कसैको ध्यान जान नसकेको बद्रिनाथको भनाइ छ।
पुम्दीकोटबासी वडासदस्य चेतभक्त शर्मा बरालले मन्दिर जाने सिँढी बनाउन वडाले ४ लाख रूपैयाँ विनियोजन गरेको बताए।
मोटरबाटो कालोपत्रे गर्न भने संघीय सरकार र प्रदेश सरकारलाई अनुरोध गरेको उनको भनाइ छ।
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, मंसिर ३, २०७८, ०१:५०:००